‘यो देशको आइजिपी एक हुन्छु दुई हुन्छु, आइजिपीको सेवा गरेरै निस्किन्छु’ रमेश खरेल भिडियो सहित « Naya Bato
‘यो देशको आइजिपी एक हुन्छु दुई हुन्छु, आइजिपीको सेवा गरेरै निस्किन्छु’ रमेश खरेल भिडियो सहित
अहिले बढुवामा दुई नम्बरमा नाम परेका खरेल सँग नेपाल आजले आज भन्दा एक अघि लिएको अन्तर्वार्ता समय सान्दर्भिक लागेर पुनः पोस्ट गरेका छौँ !
खरेलको बोली एक, झट्का अनेक ! एसएसपी रमेश खरेलले प्रहरी संगठन र आफ्नो करिअरका बारेमा केन्द्रीत रहेर दिएको अन्र्तवार्तालाई गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएका छन् ।
नेपाल आजमा सोमबार अपलोड गरिएको अन्र्तवार्तामा एसएसपी रमेश खरेलले प्रहरीमा अहिलेपनि घुसखोरी रहेको, आफुलाई हत्या गर्ने धम्की आएको तथा आफुलाई प्रहरी प्रमुख हुन नदिन व्यवधान खडा गर्न खोजिएकोलगायतका विविध विषयमा खुलेर बोलेका थिए ।
सो बारेमा गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको सचिवालयले अभिव्यक्ति वास्तविक रहे नरहेको बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने गृहमन्त्री बस्नेतको नीति रहेको सचिवालयले प्रष्ट गरेको छ ।
एसएसपी खरेलले कुन सन्र्दभमा राजनीतिक हस्तक्षेप र घुसखोरीको कुरा गरेका हुन् भन्ने बारेमा गृहमन्त्री गम्भीर रहेको सचिवालयको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआजी माधब जोशीले एसएसपी खरेललाई आएको भनिएको ज्यानमार्ने धम्कीका बारेमा प्रधान कार्यालय अनविज्ञ रहेको जनाए । उनले अन्र्तवार्ताका बारेमा आफुले सुनेको भएपनि काठमाडौं बाहिर रहेकाले हेर्न नपाएको बताए ।
उनले काठमाडौं फर्केपछि खरेलका अभिव्यक्तिका बारेमा विस्तृतमा बताउन सक्ने जनाए । खरेलले आफुलाई आइजिपी बनाउन नदिन चलखेल भइरहेको तर चलखेललाई परास्त गर्दै आफु आइजिपी भएरै छाड्ने भनि दिएको अभिव्यक्ति प्रहरीमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
खरेलका व्याजी एक एसएसपीले उनको अभिव्यक्तिलाई हतारको बोलि भनेका छन् । अरुको सम्भावना बढ्दै गएपछि आफ्ना पक्षमा माहोल तयार गर्न खरेलको अभिव्यक्ति आएको ति एसएसपीको ठहर छ । नाम नबताउने सर्तमा खेरलका व्याजी एसएसपीले भने, ‘बढुवा संगठन र सरकारले गर्ने हो । कसैले दाबी गर्दैमा हुने होइन । आफु नै हुन्छु, कसैले रोक्न सक्दैन भनेर सरकार र प्रहरी संगठनलाई एउटा अधिकृतले चुनौति दिन मिल्छ ?’
खरेलले भने, ‘आइजिपी भएरै छाड्छु’ एसएसपी खरेलले नेपाल आजसंगको अन्र्तवार्तामा आफु आइजिपी भएरै छाड्ने बताएका थिए । उनले आफुलाई आइजिपी हुन नदिन व्यवधान खडा गर्न खोजिएपनि व्यवधान पन्छाउंदै पन्छाउंदै आइजिपी बनेरै छाड्ने दाबी गरे । भ्रष्टहरुले आइजिपी बन्ने सपना देख्नपनि नहुंनेभन्दै उनले आफ्नो सिपाही हुंदादेखिको इतिहास हेर्न चुनौति दिए । चलचित्रमा प्रहरी अधिकृतको भुमिकामा रहेको नायकले आइजिपी भएरै छाड्ने भनि दिएको दृश्यझैं लाग्ने गरी उनले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
मलाई मार्ने धम्की आएको छ एसएसपी रमेश खरेलले आफुलाई मार्ने धम्की आएको अन्र्तवार्ताका क्रममा खुलाशा गरे । बिदेशबाट नेपालीले विदेशकै मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी मार्ने धम्की दिएको उनले प्रष्टाए । धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र कानूनी कठघरामा उभ्याइछाड्ने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीमा अहिलेपनि खुसघोरी छ बामदेब गौतम गृहमन्त्री हुंदा उनले डिआइजी बढुवाका लागि ब्रिफकेस बोकेर हिड्ने गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सो भनाइले प्रहरीवृत्तमा हंगामा मच्चाएको थियो । अन्र्तवार्ताको क्रममा उनले आफ्नो भनाइ सत्य रहेको दोहोर्याए । संगै, अहिलेपनि खुसघोरी कायमै रहेको जनाए । पहिलेभन्दा कम भएको उनको भनाइ छ ।
बामदेबसंगको सम्बन्ध रमेश खरेलका काका हुन अच्युतकृष्ण खरेल जो ०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको आइजिपी थिए । गृृहमन्त्री रहेका बामदेब गौतमले खरेललाई बर्खास्त गरिदिएका थिए । काकालाई गरिएको अपमानको ईख भतिजा रमेशले अहिलेपनि सांधेको चर्चा हुने गर्दछ । तेस्रो पटक गृहमन्त्री भएका गौतमले एक बर्ष अघि एसएसपी खरेलले आफुलाई भेट्न नआएको तथा सलुट नगरेको दुखेसो सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गरेका थिए । खरेलले गौतमसंग आफुले ईख नसांधेको तर उनकोमा धाउंदै जान आवश्यकपनि नरहेको जनाए ।